Naya Drishti | जसपामा प्रष्ट दुइधार, बन्ला त् देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार ? - Naya Drishti जसपामा प्रष्ट दुइधार, बन्ला त् देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार ? - Naya Drishti
जसपामा प्रष्ट दुइधार, बन्ला त् देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार ?
वैशाख २८, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा प्रष्ट २ धार देखिएका छन् । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मध्यरातमा वक्तव्य निकालेर नयाँ सरकार गठन आफ्नाे पार्टीकाे प्राथमिकता नरहेको बताएका छन् भने नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संग मिलेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।
जसपामा उपेन्द्र नया सरकार बनाउन लागिपरेका छन् भने ठाकुर कुनै सरकार लाई समर्थन नगर्ने बताएका छन् । संसदमा पनि ठाकुर पक्ष तटस्थ बसेको थियो भने उपेन्द्र पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।
जसपामा ठाकुर र उपेन्द्रको पक्षमा १६-१६ सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् भने जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षका १६ सांसद देखिएका छन् । २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३६ सांसद चाहिन्छ । तर ठाकुर पक्ष सहभागी नभएमा नया सरकार बन्दैन ।
ठाकुरको वक्तव्यले हंगामा :
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मध्यरातमा वक्तव्य निकालेका छन् । उनले निकालेको वक्तव्यले राष्ट्रिय राजनितामा पुनः तरंग ल्याइदिएको छ । वक्तव्यमा उनले नयाँ सरकार गठन आफ्नाे पार्टीकाे प्राथमिकता नरहेको बताएका छन् ।